एसिड आक्रमणमा परेकी संगिताले को सँग कसिन लगनगाँठो ? — Sanchar Kendra
एसिड आक्रमणमा परेकी संगिताले को सँग कसिन लगनगाँठो ?
काठमाडौँ । सन् २०१५ मा घर नजिकैको एक युवकबाट एसिड आक्रमणमा परेकी संगिता थापा मगर वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी छिन् । संगिताले पाँचथरका २४ वर्षीय निश्चल लिम्बुसँग प्रेम विवाह गरेका हुन् ।
संगिताले भनिन् -‘एसिडको आक्रमणबाट मेरो जीवन सकियो जस्तो लागेको थियो, तर होइन रहेछ, आत्मबल बलियो भएमा जीवन फेरी सामान्य बन्दो रहेछ ।’ हाल काठमाडौँकै कुमारी बैङ्कमा कार्यरत संगिताले निश्चललाई आफ्नी आमाको माध्यमबाट चिनेकी थिइन् ।
एक वर्ष जति प्रेममा बसेपछि बिहे गर्ने निर्णय गरेको संगिताले बताइन। अब दुवै जना मिलेर एसिड आक्रमण बारे जनचेतना जगाउने तथा आफू जस्तै आक्रमणमा घाइते भएका दिदी बहिनीका लागि काम गर्ने योजना रहेको समेत संगिताले बताइन् ।